MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE BUURTA DAHABIGA AH EE BERNESE - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Buurta Dahabiga ah ee Bernese
Dahab dahab ah / Eyga eyda isku dhafan ee loo yaqaan 'Bernese Mountain Dog'
Luca, oo ah nin da 'yar oo da' weyn oo dahab ah. Eyga, sawir qadarin leh Baker's Bernese Blessings
Bernese Golden Eyga eey
Buurta Dahabka ah Eey
Eyga Dahabka Dahabka ahi ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Buurta Bernese . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine-ka Mareykanka = Eyga Buurta Dahabka ah
DBR = Diiwaangeliyaha Taranka Nakhshadeeye = Eyga Buurta Dahabka ah
Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga = Eyga Buurta Dahabka ah
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Eyga Buurta Dahabka ah
Lucy the Golden Mountain Dog (Dahabka Dahabka / Berner isku dhafan) markay 7 bilood jirsatay— Iyadu waa jacayl, saaxiibtinimo iyo qurux. Iyadu waa qof caqli badan, illaa iyo haddana way fududahay in la tababaro.
Lucy eeyga Dahabka Dahabka ah (Dahabka Dahabka ah / Berner isku dhafan) ee 7 bilood jira
Quincy eeyga Dahabka Dahabka ah ee jira 1 sano jir— Waxaan ka qaadanay Quincy guri-yaqaan. Hooyadiis waxay ahayd badh Bernese iyo badh Retriever aabihiisna wuxuu ahaa saafi Bernese (3/4 Bernese Mountain Dog 1/4 Golden Retriever), markaa sidaad qiyaasi karto, Quincy ma ahayn mid raqiis ah. Inta badan walaalihiis waxay lahaayeen calaamadaha Bernese, halka Quincy iyo mid ka mid ah walaashiis ay ahaayeen madow saafi ah. Midkoodna dahab ma ahayn, markaa ma aqaano sababta ay kuwa wax yaqaan ay ugu yeereen Eeyo Dahab Dahab haha. Waqtigaan la joogo, Quincy wuxuu culeyskiisu yahay 80 rodol, wuxuuna ku nasan karaa baalashiisa garabka garbahayga si raaxo leh oo waxaan joogaa 5 '7'. Eygan waa mid la yaab leh oo qumman, laakiin ma dhihi karo taas guud ahaan, sababtoo ah, mid, waxaan ogahay in walaalkiis uu leeyahay arrimo dabeecad ah, waana kan kaliya ee noociisa ah ee aan waqti ku qaatay leh. Laakiin Quincy xaqiiqdii waxay heshay sida ugu fiican labada adduun. Isagu waa nin caqli badan, aad u daacad ah oo jecel inuu ka farxiyo, sidaas darteed tababbarkiisu waa neecaw. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u tababarayaa tabo iyo xirfado eyda adeeggu u yaqaanaan una adeegsadaan mashruuc dugsi, isaguna si dhakhso leh ayuu wax u baranayaa. Dabeecadda Quincy waa mid la yaab leh, dib ayuu udhacay oo si fudud ayuu ku socdaa. Wuxuu kaliya ku camiray eeygayaga kale, Springer Spaniel oo ka weyn isaga hadana aad u sarreeya, haddii kalese wuxuu jecel yahay eeyaha kale oo kaliya ayuu qarax ka dhacaa baarkinka eeyga. Dhammaan eeygan waxay rabaan waa jacayl iyo cunto.
Xusuus-qorka Macluumaadka eeyaha ee: dabeecadda eyga waa milicsiga tooska ah ee milkiilihiisa awooda ay ku fahmi karaan kuna siin karaan waxa uu si dabiici ah ugu baahan yahay sida xayawaanka kaneecada, oo aan ku jirin dhalashada ama isku darka nooc eeyaha.
Quincy eeyaha madow ee Dahabka ah ee jira 1 sano jir. Wuxuu ku leeyahay meel cad cad xabadka.
Peter, eey Ey Dahab ah oo jira 4 bilood, sawir qadarin leh Baker's Bernese Blessings
'Coleman, oo la ii sheegay inuusan weligiis la kulmin qof ama eey uusan jeclayn! Safiir weyn oo caan ah oo caan ah. ' Lahaanshaha sawirka Baker's Bernese Blessings
'Red Sox, jiil labaad GMD. Iyadu waa mid aad u jilicsan oo macaan — eeyaha dhabta ah. Halkan waxay daawaneysaa kooxdii ay jeceshahay baseball! ' Lahaanshaha sawirka Baker's Bernese Blessings
18-jir jir ah eey eyda 'Mountain Mountain Dog', sawir qadarin leh Baker's Bernese Blessings
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Eyga Buurta Dahabka ah
Sawirada Eyga Ee Buurta Dahabiga ah
Liiska eeyaha eeyga isku dhafan ee loo yaqaan 'Bernese Mountain Dog Mix'
leavitt bulldog vs olde afsomali bulldogge
cavalier king charles iskudhafka papillon
eeyaha culeyskoodu yahay 20 rodol
5 bilood jir bulldog ingiriis
sida loo muujiyo eeygayga waxaan ahay alfa